အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ ပထမဆုံးသော ကွန်ဂရက်အောက်လွှတ်တော်တွင်ပြုလုပ်မည့် နိုင်ငံစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ကြားနာပွဲတွင် မူဝါဒရေးရာများကိုဆွေးနွေးတင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်. သူ့အနေနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အခွန်အခများဖြတ်တောက်ပေးရေး ဥပဒေများဖျက်သိမ်းရေး နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးအဖွဲ့မှခွဲထွက်ရေးစသည့်အချက်များကို အလေးထားပြောဆိုသွားမည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်.
ထိုရှင်းလင်းပြောကြားရာတွင် သမ္မတသစ်ထရန့်အနေနဲ့ အခွန်အကောက်တွေကို လျှော့ချပေးဖို့ကိစ္စ အသေးစိတ်ကို အသေအချာပြောကြားသွားမလားဆိုတာကို ဈေးကွက်ကစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်. မစ္စတာထရန့်အနေနဲ့ စီးပွားရေးမူဝါဒတွေကို ရေရေရာရာမပြောသွားပါက အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုး ကျဆင်းနိုင်ပါတယ်. အမေရိကန်ဘဏ္ဏာရေးအကြီးအကဲသစ်ဖြစ်သူ Steven Mnuchinရဲ့ယခင်အပတ် တနင်္ဂ​နွေနေ့ ရုပ်သံအင်တာဗျူးမှာ သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ အခွန်လျှော့ချပေးမယ့်ကိစ္စကို ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘဲ လုပ်ဆောင်စရာတွေအများအပြားကျန်နေသေးတယ်လို့်ဆိုတဲ့အတွက် ဈေးကွက်က စိတ်ပျက်နေပါတယ်.ထို့ကြောင့် ထရန့်ရဲ့ပြောကြားမှုတွေထဲမှာ "အခွန်လျှော့ချပေးဖို့ ဆောင်ရွက်နေမု" နဲ့ပက်သက်ပြီးပြောဆိုရာမှာ အသေးစိတ်ပြောမပြောဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ရမှာပြဲဖစ်ပါတယ်.